JAWAAB CAD: Arturo Vidal Oo Si Cad Uga Hadlay Hadalkii Uu Dhawaan Cheillini Ku Sheegay Inuu SAKHRAAN Ahaa Wakhtigiisii Juventus – Gool24.Net
JAWAAB CAD: Arturo Vidal Oo Si Cad Uga Hadlay Hadalkii Uu Dhawaan Cheillini Ku Sheegay Inuu SAKHRAAN Ahaa Wakhtigiisii Juventus
Khadka dhexe ee kooxda Barcelona Arturo Vidal ayaa ka hadlay hadal uu dhawaan ka sheegay kabtanka Juventus ee Giorgio Cheillini xilli ay sii socdaan hadalada muranada xoogan dhalinaya ee laga soo xiganayo buuga Cheillini ee dhawaan soo baxay.
Cheillini ayaan kaliya Vidal ka sheegin hadalo xoogan oo ay saxaafadu aad uga warrantay balse waxa uu sidoo kale kululaystay Felipo Melo iyo Mario Balotelli oo ay qolka labiska soo wadaageen.
Vidal iyo Cheillini ayaa wakhti wanaagsan oo guul ah kusoo qaatay Juventus iyagoo kusoo wada guuleystay afar jeer horyaalka Scudetti intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2015.
Hadalka uu Cheillini buugiisa kaga sheegay Arturo ee hadal haynta badan keenay ayaa ah inuu khamri cab badan yahay xiddiga ree Chile isla markaana laga waayi jiray arooraha qaar tababarka marka uu habeenkii caweeyo.
Vidal oo ka hadlay arrinkaas ayaa sheegay in uusan habeenkii caweys tagi jiray fasax la’aan isla markaana uu sida dadka kale uun yahay oo uu asxaabtiisa wakhtiyada qaar u raaci jiray goobaha cuntada.
“Dadku waxay diirada saareen waxyaabaha ugu xun ee uu Cheillini yidhi, mana arko sababta uu qof arrimahaas u xusayo, aniga way iga cadhaysiisay laakiin waxa uu sidoo kale sheegay inaan horyaal ahay” Ayuu ugu horreynba yidhi Vidal.
“May ahayn wax aanan anigu samayn karin, waa la ii ogolaa inaan dibada tago, anigu bini aadam ayaan ahay sida qofkale oo kasta, si adag ayaan u shaqeeyaa haddii ay asxaabtaydu ku kulmaan goob cuntona, ogolaanshaha kooxda, sidoo kale waan tagi doonaa”